Colombia: Mankalaza ny Fetiben’ny Voninkazo i Medellín · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2018 17:26 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Septambra taona 2009 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Isan-taona, rehefa tonga ny volana Aogositra, mitodika amin'ny Fetiben'ny Voninkazo amin'ny dikan'ny teny rehetra ny tanànan'i Medellín, Kolombia. Atao ao amin'ny tranombakoka sy valan-javaboahary ny hetsika ara-kolontsaina, ary marobe ireo orkesitra manao fampisehoana manodidina ny tanàna. Misy ihany koa ny parady (filaharana) ataon'ny fiara antitra izay mandrafitra ny ampahany amin'ny fandaharam-potoan'ny hetsika ankafizin'ny mponina sy ny mpitsidika. Na izany aza, iray amin'ireo tena mahaliana ny parady ataon'ny “silleteros” (mpitondra voninkazo), izay tantsaha tonga ao an-tanàndehibe mba hanasongadina ireo karazam-boninkazo Kolombiana.
Sarin'ny Voninkazo Silleta avy amin'i Jota Estrada, zon'ny mpamorona: Creative Commons.
Ny “silletas” dia asa ara-javakanto noforonin'ny silleteros, ary lasa marika famaritana ny Fetiben'ny Voninkazo [es]. Nandritra ny andro farany tamin'ny hetsika, voninkazo 500 teo ho eo no naseho tamin'ny parady manerana ny tanàna teo an-tsoroky ny silleteros, mampiseho ny lokony sy ny halehiben'ireo voninkazo ireo izay nambolen'ireo tantsahan'i Santa Elena, kaominina eo amin'ny adiny iray miala ny tanànan'i Medellín.
Nandritra ny endriky ny Fetiben'ny Voninkazo taona 2009 izay natao tamin'ny 31 Jolay hatramin'ny 9 Aogositra, nanaraka ny hetsika tamin'ny alalan'ny bilaogy ofisialy ny olona manerana izao tontolo izao. Ao amin'ny bilaogy, manome ny fikarakarana ny fetibe manontolo, ny hetsika, ny fanatrehana izany, ny fiarovana sy ny trano fisakafoanana ambony ny mpandrindra ny fetibe.
Sarin'ny Silletero miaraka amin'ny voninkazo ao an-damosina, avy amin'i Felimartinez.
Na izany aza, niaiky ihany koa ireo mpikarakara ny fetibe fa misy ny zavatra sasany mila hatsaraina, ka anisan'izany ny fitarainana momba ny halafosan'ny vidim-pidirana amin'ny fitsangantsanganana sasany, izay tsy dia be mpanatrika. Nisy ihany koa ny savoritaka tamin'ny fikarakarana ny hetsika sasany:
Na dia miresaka momba ny fahombiazan'ny fetibe aza ireo tarehimarika notaterina, tamin'ity taona ity, voamarika tamin'ny alin'ny “silleteros” tao Santa Elena sy ny korontana tao amin'ny Filaharan'ny Fiara Fahiny (Antique Car Parade) ny “marika mainty”.
Bilaogera Xady of Expresate [es] manoratra momba ny fitohanan'ny fiara ao an-tanàna izay voakasiky ny fanatapahan'ny arabe voalohany mba handraisana ireo mponina an'arivony ao Medellín, sy ireo Kolombiana hafa sy vahiny mpitsidika izay nankafy ny habetsahan'ny hetsika:
Mba hametrahana hetsika sasany na hetsika maro, ny biraon'ny Ben'ny tanàna sy ny sekreteran'ny Fifamoivoizana dia nisafidy ny hanakatona ny lalana sasany izay tena ampiasan'ny olon-kafa tsy manatrika ny hetsika nomanina, ka miteraka fitohanan'ny fiara na fitangoronam-piara amin'ny endrika fitateram-bahoaka, tahaka ny metro izay fomba haingana indrindra hivoahana rehefa misy ireo karazana olana ireo eny an-dalambe.
Ankoatra izay, mikasika ireo mpitatitra, ampondra, sy fondas (bar), matetika maro ny fifandonana sy ady ary saintsaino ny antony, ny vehivavy na ny toaka fotsiny. Miteraka lafiny ratsy amin'ny Fetiben'ny Voninkazo izany.
Na dia tamin'ny zavatra nandeha tsara sy tsy nety aza, nikasa hampiray ny tanàna tamin'ny alalan'ny fomban-drazana izay nanomboka tamin'ny taona 1957 ny Fetiben'ny Voninkazo, rehefa avy niakatra tao an-tananan'i Medellín ireo tantsaha miaraka amin'ny voninkazo teny an-damosiny mba hivarotra azy ireo. Indreto songadina tamin'ny hetsika taona 2009 tamin'ny Fetiben'ny Voninkazo izay novokarin'ireo mpikarakara ny fetibe: